Ingxoxo yevidiyo yeqembu: iyiphi isevisi okufanele uyikhethe?
Abantu bayakuthanda ukuxhumana, kodwa kuthiwani uma uqhelelene ngamamayela nomuntu omthandayo?Imiphumela yokuhlolwa evela ezinsizeni ezinhlanu zokuxoxa ngevidiyo zabasebenzisi abaningi izokusiza ukuthi udale iklabhu yakho ebonakalayo ukuze uxoxe nabangane kuwebhu.Izinga kanye nokuba lula kwezinsizakalo zengxoxo yevidiyo kuthonywa izici eziningi, kusukela kumkhawulokudonsa otholakalayo kuya kukhwalithi yamakhamera ewebhu ababambiqhaza.Kusetshenziswe amadeskithophu amabili, amalaptop amabili eWindows kanye neMacBook eyodwa ukuze kuhlolwe.Amakhompyutha axhunywe kuNethiwekhi nge-Ethernet, amakhompyutha aphathekayo axhunywe kusetshenziswa okungenantambo.Ukuhlola kucabangele ukuthi kulula kangakanani ukufaka nokusebenzisa isevisi ethile nokuthi ingabe inemisebenzi eyengeziwe.
Ukufakwa kwe-Google HangoutsUkuze usebenzise i-Google Hangouts, udinga i-akhawunti ye-Google+.Uzodinga futhi ukufaka i-plug-in yesiphequluli ehambisana ne-Windows XP nangaphezulu, i-Mac OS X 10.5 nangaphezulu, noma i-Linux.Ingxoxo yevidiyo ingeniwe ekhasini lakho le-Google+.Kwesokudla uzothola inkinobho ethi Qala Ikholi Yevidiyo.Ukuyichofoza kuzokuyisa kuqala ekhasini lokuhlola lapho i-Google izovula khona ikhamera yakho yewebhu nemakrofoni.Kulesi sigaba, abekho abangani bakho abangakubona okwamanje.
Phakathi nomhlangano wevidiyo, ungabuka amavidiyo e-YouTube
Ikhasi lokuhlola linebhulokhi ongakhetha kuyo "imibuthano" (noma amaqembu abangani) abazokwaziswa ngengxoxo yevidiyo. Uma ingxoxo yevidiyo iqala, noma yimuphi umsebenzisi ofakwe "embuthanweni" okhethiwe uzokwazi ukuyibona futhi, uma ethanda, ajoyine ingxoxo.Ukuze uqale ukuxoxa, chofoza inkinobho ethi Joyina bese uya egumbini lomhlangano wevidiyo. Ungakwazi ukumema abanye abasebenzisi ukuthi babambe iqhaza engxoxweni ngokuthayipha amakheli abo e-Gmail kubha engakwesokunxele. Abantu abangafika kwabayi-10 bangabamba iqhaza engqungqutheleni yevidiyo.
Isixhumi esibonakalayo sevidiyo nekhwalithiNgesikhathi sengxoxo, isikhulumi sizovezwa efasiteleni elikhulu, futhi bonke abanye ababambiqhaza - kumafasitela amancane angezansi. Le fomethi yokubonisa ithatha ukuxhumana okuphucuzekile. Uma abantu ababili bekhuluma ngesikhathi esisodwa cishe ngevolumu efanayo, i-Google Hangouts izokhetha eyodwa kuphela kubo, ezoboniswa phakathi nendawo. Kodwa-ke, uma ukukhetha kwe-Google kungahambisani nawe, ungakhetha ngokuzimela ukuthi yimuphi wabahlanganyeli ozovezwa phakathi nendawo yewindi.Njengoba ucwaningo lubonisile, uma inkomfa ngevidiyo ihlanganisa ababambiqhaza abangaphezu kwabahlanu, ividiyo inganciphisa ijubane, futhi ngezinye izikhathi isithombe siba sekhwalithi ephansi ngokusobala. Izwi libuye lihlanekezelwe ngezinye izikhathi, kodwa ngokuvamile izinga lakho kokubili ividiyo nomsindo liphezulu kakhulu.
Izici EzengeziweNgaphezu kokusakaza ividiyo, i-Google Hangouts inikeza ezinye izici ezimbalwa. Inkinobho enkulu engezansi kwewindi levidiyo ikuvumela ukuthi uthumele umlayezo wombhalo weqembu. Kodwa ewindini elikhulu lengxoxo yevidiyo, ulwazi oluthunyelwe omunye wabahlanganyeli umlayezo wombhalo aluvezwa. Abanye abasebenzisi, ngokubona kwabo, cindezela inkinobho ethi "Xoxa" ukuze bafunde izincwadi.Isici esibalulekile yikhono lokwenza i-YouTube isebenze usebenzisa inkinobho ekwibha yamathuluzi engezansi. Ikuvumela ukuthi uthole ividiyo ezoboniswa esikrinini sasekhaya kuyo yonke ingqungquthela. Ngesikhathi sokudlala ividiyo, i-Hangouts izothulisa imakrofoni yakho ngokuzenzakalela ukuze izwi lakho lingasakazwa ngevidiyo ngemuva. Kodwa uma usadinga ukukhuluma, inkinobho ethi Push to Talk izokusiza, okuzonciphisa ivolumu yevidiyo futhi uvule imakrofoni yakho.
Abanikazibe-Notebook Bokusebenza bayelulekwa ukuthi basebenzise lesi sixazululo kuphela ezingqungqutheleni zevidiyo ezimfushane, njengoba zesikhathi eside zidala ukushisisa okubonakalayo kwamakhompyutha aphathekayo. I-Google Hangouts, ngakolunye uhlangothi, iyithuluzi elihle lokuxhumana kwevidiyo yeqembu elincane, kodwa ukuze uyisebenzise, ​​wonke umuntu kufanele abe ne-akhawunti ye-Google.
Ukufakwa kwe-Skype PremiumUkuze uqhube umhlangano wevidiyo weqembu ku-Skype, udinga i-akhawunti ye-Skype Premium enemali yokubhalisa engu-$ 9 / ngenyanga (ukufinyelela kwe-premium yosuku olulodwa kungathengwa ngo-$ 5).Ngokusetha ingqungquthela yevidiyo, umnikazi we-akhawunti ye-premium angajoyina abanye abasebenzisi be-Skype kuyo, kungakhathaliseki ukuthi iyiphi i-akhawunti abayisebenzisayo - ekhokhelwayo noma mahhala.Uma umhleli wengqungquthela eshiya ingxoxo yeqembu, iseshini iphela kubo bonke abahlanganyeli.
Zombili izinhlobo zamahhala nezikhokhelwayo ze-Skype zidinga ukubhaliswa ngesevisi kanye nokufakwa kohlelo lokusebenza lweklayenti levidiyo kukhompyutha. Ngakho-ke, lena akuyona inketho engcono kakhulu uma ingqungquthela yevidiyo idinga ukuhlelwa ngokushesha. Uma usungenile ku-akhawunti yakho, ungasesha abangani nge-Facebook, Gmail, Hotmail, noma ngesiteketiso sakho seSkype. I-Skype Premium ikuvumela ukuthi uxhume engqungqutheleni yevidiyo kuze kufike kubahlanganyeli abangama-24. Ukuze uvule ingxoxo yevidiyo, kufanele usebenzise inguqulo yakamuva yohlelo.
Isixhumi esibonakalayo sevidiyo nekhwalithiNgokuvamile, ikhwalithi yevidiyo nomsindo esakazwa yi-Skype idinga ukunconywa kakhulu. Izinga lokudluliswa kwevidiyo liqhathaniswa nalelo eliboniswa i-Google Hangouts: lihle kakhulu futhi licacile, libe nokulibaziseka okuncane. Kwesinye isikhathi ukusakazwa kwevidiyo kuba yiqhwa futhi inkinga ikhula njengoba ingqungquthela yevidiyo iqhubeka. Ikhwalithi yomsindo ibingcono kancane kune-Google. Abahlanganyeli abasha baboniswe ezikrinini ezincane, kodwa ngokuchofoza isikrini osithandayo kusondeza umhlanganyeli othile.Ikhwalithi yekhamera yewebhu ibaluleke kakhulu ku-Skype Premium kune-Google Hangouts. Ukuhlola kusebenzise amakhamera ewebhu amabili angu-720p HD axhunywe kumadeskithophu kanye ne-MacBook enekhamera yewebhu ye-iSight eyakhelwe ngaphakathi. Umehluko ekulungisweni kwe-Skype ye-iSight kanye namakhamera ewebhu e-HD wawumangalisa. Ukuxhuma amakhamera amathathu afanayo ku-Google Hangouts akwenzanga mehluko omkhulu kangako ngekhwalithi, nakuba isithombe esivela ku-iSight sivele sacaca kakhudlwana.
Izici ezengeziweI-Skype inezici ezimbalwa ezengeziwe eziwusizo ezakhelwe kusevisi yevidiyo yeqembu. Abahlanganyeli benkomfa yevidiyo bangathumela imiyalezo engxoxweni, ezovezwa efasiteleni elikhethekile ngaphansi kwevidiyo. Uma omunye wabahlanganyeli ebhala umlayezo wombhalo, abanye ababambi qhaza bazobona indilinga encane ebomvu esithonjaneni sengxoxo, okubonisa ukuthi umlayezo omusha ufikile. Kungenzeka futhi ukuthumela imilayezo engqungqutheleni yevidiyo yeqembu nge-SMS, kodwa lo msebenzi udinga inkokhelo eyengeziwe.Ngaphezu kwalokho, ungathumela amafayela (izithombe, i-MP3) kwabanye abahlanganyeli benkomfa nge-Skype. Lokhu kwenziwa ngefasitela eliyinhloko, elilula kakhulu, ngoba awudingi ukuvula isiphequluli noma iklayenti le-imeyili ukuze uthumele amafayela eqenjini.
Ukusebenzakwenkomfa ngevidiyo ku-Skype Premium kuyakhokhwa futhi kudinga isoftware eyengeziwe ukufakwa kunezinye izinsiza.Ikhwalithi yezwi ayiyona ehamba phambili phakathi kwezinsizakalo ezinhlanu ezihloliwe, futhi ikhwalithi yevidiyo ayingcono kunesevisi yamahhala ye-Google Hangouts.
I- TinychatIfakai-Tinychat, isevisi yengxoxo yevidiyo esekelwe kusiphequluli.Kulesi simo, awudingi ukufaka noma yini - udinga nje ukuhlela igumbi lakho lengxoxo noma ujoyine akhona.Isevisi ye-Tinychat imahhala ngezikhangiso zezibhengezo.
Uma unquma ukumisa igumbi lakho lokuxoxa, i-Tinychat izokuqondisa kumawindi amancane ambalwa ukuze ikusize ukhethe ikhamera yakho yewebhu nemakrofoni, futhi izokwazisa ukuthi ukhethe phakathi kombhobho noma iPush to Talk. Esimeni sakamuva, imakrofoni izosebenza kuphela uma le nkinobho ibanjelwe phansi.Kulula ukumema abanye engxoxweni yevidiyo. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa inkinobho ethi Yabelana etholakala ngenhla kwewindi lengxoxo. I-Tinychat izokhiqiza i-URL engathunyelwa kuwo wonke umuntu. Ungangena eqenjini lakho le-Tinychat nge-Facebook, i-akhawunti yakho ye-Twitter noma ngokungaziwa njengesivakashi. Izivakashi ezintsha zizokwazi ukubona ingxoxo yevidiyo, kodwa ukuze zengeze ukusakazwa kwazo kwevidiyo egunjini lengxoxo, kuzodingeka zichofoze inkinobho ethi Qala Ukusakaza.
Isixhumi esibonakalayo nekhwalithi yevidiyoKu-Tinychat, ungahlela ukusakazwa okungafika kweziyi-12, kodwa inani lababukeli alinamkhawulo.Ikhwalithi yevidiyo ku-Tinychat yinhle, kodwa ikhwalithi yomsindo iphansi.Imisindo yangemuva ephezulu ayijabulisi ikakhulukazi.Amazwi azwakala enokhahlo kakhulu futhi ahlanekezelwe kancane uma kuqhathaniswa ne-Hangouts ne-Skype.Kunokuphazamiseka komsindo nevidiyo imizuzwana embalwa, kanye nokubambezeleka kokusakaza kwevidiyo, ngemva kwalokho ukuqalisa kabusha isiphequluli kuyadingeka.
Izici EzengeziweIsici esithakazelisa kakhulu se-Tinychat i-EtherPad Lite (ungayiqalisa ngokuchofoza isithonjana esinesiqephu sephepha ngaphansi kwewindi levidiyo).Kule block, umhlanganyeli ngamunye engqungqutheleni ngevidiyo angathatha amanothi, okwenza kube lula ukusebenza ngamadokhumenti ndawonye.Ngaphezu kwalokho, amanothi anoma yimuphi wabahlanganyeli azovezwa ngombala ohlukile.
UkusebenzaNgezingxoxo ezinde, i-Tinychat ikude nenketho engcono kakhulu.Kepha kungaba yisixazululo esihle uma udinga ukuqoqa abantu ngokushesha ukuze uthole ingqungquthela yevidiyo.Futhi, le sevisi ifanele umsebenzi wokubambisana kumaphrojekthi adinga ukubhala okuningi kunokukhuluma.
Ukufakwa kwe- AIM AVInsizaentsha ye-AV ye-AIM ibonisa ukuzibophezela kwe-AOL ukuhlala inokuncintisana embonini yezinkomfa ngevidiyo.Inkampani ithuthukise indlela elula nelula yokuxhumana namaqembu amancane abasebenzisi abangafika kwabane.
Ingxoxo yevidiyo ye-AV
Ukuqala ingxoxo kulula kakhulu: vele uqinisekise ukuthi ungaphezu kweminyaka engu-13 ubudala, futhi i-AV izokunikeza ukufinyelela engxoxweni. Ngemva kwalokho, isistimu izokhiqiza i-URL edinga ukwaziswa kubaxhumanisi besikhathi esizayo. Abasebenzisi be-Mac bokuqala bangase batshelwe ukuthi bafake inguqulo ye-Adobe Flash ehambisana ne-Mac OS 10.6 noma ngaphezulu. Kokunye, cishe isivele ifakiwe, ngakho-ke asikho isidingo sokulanda nokufaka isofthiwe eyengeziwe. Ngaphezu kwalokho, ngeke udinge ukubhalisa nesevisi futhi unikeze i-AIM ngolwazi lomuntu siqu.
Isixhumi esibonakalayo nekhwalithiEkuhloleni kwethu i-AV, ividiyo yenze okubi kakhulu kunakwezinye izinsiza.Ukusakazwa kwevidiyo kuvame ukuma, nakuba ukudluliswa komsindo bekukuhle kakhulu.Ukuqalisa kabusha isevisi nakho akuzange kunikeze lutho.Ngaphezu kwalokho, ngemva kokulayisha kabusha igumbi lengxoxo, kwatholwa ababambiqhaza abathathu, nakuba ababili kuphela ababehilelekile ekuhlolweni.
Izici ezengeziweAnesizotha impela - ingxoxo yombhalo kanye nekhono lokuthatha izithombe-skrini zengqungquthela yevidiyo.
Ikhwalithiye-AV yokusebenza ayizifanele izinhlolokhono noma izinkomfa zebhizinisi. Nokho, i-AV ingaba yisixazululo esilula nesihlakaniphile sokuxhumana neqembu elincane labantu abangafika kwabane, noma ukuhlela ngokushesha amakholi wevidiyo ngaphandle kokufaka isofthiwe eyengeziwe. Ngokwesibonelo, kwenza kube lula ukuxhumana nezihlobo noma abantu obajwayele abangenalo ulwazi olubanzi lwezobuchwepheshe.
Ukufakwa Kwe-AnyMeetingIsevisi yamahhala ngokuphelele i-AnyMeeting ikuvumela ukuthi uxhume abantu abangafika kwabayisithupha ngesikhathi esisodwa engxoxweni yevidiyo esebenzayo.Ngesikhathi esifanayo, abantu abangafika ku-200 bangabamba iqhaza kwi-videoconference njengezibukeli.Ukuze uqale ukuxoxa, umsebenzisi oyedwa kuphela okufanele abhaliswe nesevisi (imvamisa umhleli wengxoxo).Ukuze umeme abahlanganyeli, vele uchofoze okuthi Qala I-Webinar, futhi ngemva kokuchofoza inkinobho ethi Qala imakrofoni nekhamera etholakala kubha yamathuluzi engezansi, ingqungquthela yevidiyo izoqala. \_
Ingxoxo yevidiyo ye-AnyMeeting
Ekuqaleni, i-AnyMeeting izobonisa iwindi lokulungiselela.Ngemva kokunikeza ukubukeka kwakho okokugcina, cindezela inkinobho ethi Ngilungile futhi uzozithola usegunjini lenkomfa yevidiyo.
Isixhumi esibonakalayo sevidiyo kanye nekhwalithiye-AnyMeeting enye isevisi engasebenzi kahle kuma-Mac amadala. Njenge-AV, idinga i-Adobe Flash ukuthi ifakwe ku-Mac OS 10.6 noma ngaphezulu. Kodwa umdlalo ufanelekile ikhandlela: ikhwalithi nokunemba kokudluliswa kwevidiyo akukhona okungaphansi kwalokho okuhlinzekwa yi-Google Hangouts noma i-Skype. Izinga lokudluliswa kwevidiyo nezwi lihle impela, ngaphandle kokuthi "insimbi" ngokweqile nokuhlanekezela.
IziciEzengeziwe AnyMeeting inothile ngezici ezengeziwe. Ungakhangisa izikrini ngezethulo, ulwazi lokuthumela ingqungquthela, noma usebenzise isici esithi "umhlangano ngocingo" ukuze labo abangakwazi okwamanje ukufinyelela ikhompuyutha bakwazi ukulandela ukuthuthukiswa kwemicimbi. Umhleli wengqungquthela uzobona uhlu lwababekhona, futhi abakhona bazokwazi ukukhetha isithonjana kumenyu yesimo sami sengqondo esifana nesimo sabo sengqondo. Ngaphezu kwalokho, ingxoxo yombhalo, ividiyo nomsindo kungacishwa noma kwenziwe kutholakale.
UkusebenzaKwabangani noma ukuxhumana komndeni, le sevisi igcwele kakhulu imisebenzi, kodwa ilungele imihlangano yebhizinisi nezethulo.Futhi lapha inzuzo yayo ebaluleke kakhulu ukuthi kuphela umhleli wengqungquthela okufanele abhalise kuyo.Bonke abanye ababambiqhaza bangena engosini yezingxoxo ngokumane bafake ikheli le-imeyili lapho isimemo esithunyelwe khona kubo.
Ukukhetha okungcono kakhuluNgakho iyiphi isevisi engcono kakhulu?Sicabanga ukuthi ukukhetha kwakhe kuncike ezinhlosweni zakho zamanje.I-Google Hangouts ne-Skype yizinsizakalo ezimbili ezidume kakhulu nezicebile.Angcono kakhulu emaqenjini amancane uma kuqhathaniswa, wonke anama-akhawunti e-Google noma e-Skype.I-Hangouts imahhala ngokuphelele, kodwa uma ikhwalithi yezwi ibalulekile kuwe, i-Skype kufanele ikhethwe.I-Tinychat noma i-AV evela ku-AIM ingaba yisinqumo esihle uma unesikhathi esilinganiselwe futhi udinga ingxoxo ngokushesha ngaphandle kokufaka noma iyiphi isofthiwe kuqala. Amalungu azokwazi ukufinyelela kukho ngokuchofoza nje i-URL ethunyelwe kuwo, ngaphezu kwalokho, zombili lezi zinsizakalo zimahhala ngokuphelele. I-Tinychat ifaneleka kakhulu kulabo abathanda kakhulu ukusebenzisana kumadokhumenti, kunokuxhumana ngezwi. Futhi insizakalo ye-AV ingcono ukuxhumana nezihlobo nabangane, okungadingeki ngisho babhalise kuyo. Ekugcineni, i-AnyMeeting inikeza inkundla enhle kakhulu yezinkomfa zebhizinisi ezinkulu, njengoba abantu abangafika kwabangu-200 bangabuka isethulo sevidiyo ngesikhathi esifanayo. Ngaphezu kwalokho, umhleli wengqungquthela kuphela okufanele abhalise nomhlinzeki wesevisi. Izici ezengeziwe zithuthukisa amathuba ebhizinisi,kodwa izoba yi-superfluous ngokucacile lapho ukhuluma nabangane noma umndeni.
Iyini ingxoxo yevidiyo?
Njengoba umuntu engumuntu wezenhlalo, ukukhulumisana kunendima ebaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe.Ngezikhathi ezithile, ngisho nomuntu ogodliwe kakhulu udinga ukukhuluma nothile.Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kwezingxoxo eziphumelelayo nezisezingeni eliphezulu, akunakwenzeka ukuxazulula noma yiziphi izinkinga zomsebenzi nebhizinisi.
Emakhulwini amaningi eminyaka, abantu bebelokhu behlangana ngenkuthalo nabangane babo nabangane ukuze bakhulume, futhi baxazulule zonke izinkinga zabo ohlelweni lokuxhumana.Kodwa iqiniso lanamuhla liwukuthi ngokuvamile kunzima kakhulu ngathi ukuthola isikhathi sokwenza i-aphoyintimenti, sivele kuso futhi sikhulume ngesihloko esithile no-interlocutor esinesithakazelo kuye.
Ngenhlanhla, ngemuva kokuthi i-inthanethi ingene empilweni yethu yansuku zonke ngokuqinile nangokujulile, iningi lokuxhumana kwethu liye lafinyelela eqinisweni elibonakalayo.Sibhalelana nabangane ezinkundleni zokuxhumana, sithumela ama-imeyili kozakwethu kanye nozakwethu.
Muva nje, sekuvele ithuba elisha lokuxhumana nge-inthanethi, elitholakala kuwo wonke umuntu onekhamera yewebhu futhi exhunywe ku-inthanethi evamile enesivinini esikhulu ngaphandle komkhawulo wethrafikhi.
Ukushaya kwevidiyo okuku-inthanethi okwamanje kunikezwa amasayithi amaningi kuwebhu.Okusele kumsebenzisi ukuthi akhethe ngokuvuna omunye wabo.Okuphawulekayo, isibonelo, isevisi yengxoxo yevidiyo eku-inthanethi http://pentavideo.ru.
Insiza ine-interface elula futhi enembile, ngaphandle kwalokho, imahhala ngokuphelele, ebaluleke kakhulu kubasebenzisi abaningi ..
Ingxoxo yevidiyo eku-inthanethi ikuvumela ukuthi uqhube nje izingxoxo nomuntu oxoxa naye, kodwa futhi uqhube izingxoxo nenani elikhulu labantu ngesikhathi esisodwa kwimodi yengqungquthela.Ngenxa yalesi sici sakamuva, izinkampani eziningi zisebenzisa izingxoxo zevidiyo ukuze zibambe imihlangano namahhovisi azo akude nezigaba.
Njengoba igama liphakamisa, ingxoxo yevidiyo iyikhono lokuqhuba ingxoxo ngefomethi yevidiyo.Ngamanye amazwi, awuzwa nje kuphela umxhumanisi wakho, kodwa futhi umbona ngekhamera yevidiyo.
Isidingo esikhulu sezingxoxo zevidiyo eziku-inthanethi ngokujwayelekile, kanye nenkonzo ye-http://pentavideo.ru ikakhulukazi, kungenxa yokuthi ukuxhumana ngevidiyo ku-inthanethi kunikeza amathuba amahle okuveza imizwa.Hhayi-ke, ukuxhumana okusebenzayo ikakhulukazi ngeke kukulimaze iminwe yakho, njengoba kwenzeka kaningi uma ingxoxo isesimweni sokuxhumana.
Kodwa ukuxhumana kwevidiyo ku-inthanethi kuthola ukuthandwa kakhulu hhayi ngobungane, kodwa ukuxhumana kwebhizinisi.Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu.Ngakho-ke, ngokwesibonelo, umphathi osohambweni lwebhizinisi noma eholidini angakwazi ukulawula kalula umsebenzi enhlanganweni yakhe.Yebo, nabangaphansi, uma kunesidingo, banethuba lokubonisana naye kunoma iyiphi inkinga ebalulekile.
Uma sifingqa zonke izinzuzo eziyinhloko zokusebenzisa ingxoxo yevidiyo, khona-ke, okokuqala, amaphuzu abalulekile alandelayo kufanele aqashelwe:
- ithuba lokuthatha izinqumo ngokushesha;
- ukwanda okukhulu kokukhiqizwa kwabasebenzi;
- amathuba okuthola usizo lochwepheshe;
- ukonga izinsiza zezimali;
Uma ungakaze usebenzise ifomethi yokuxhumana ku-inthanethi ngekhamera yevidiyo ngaphambilini, sincoma kakhulu ukuthi uzame.Ngokuqinisekile ngeke udumale.
I-Vesti.net: Ingxoxo yevidiyo ye-Microsoft Teams izobeka ababambiqhaza endaweni eyodwa ebonakalayo
IMicrosoft imemezele isibuyekezo esikhulu sensizakalo yenkomfa yevidiyo yeQembu layo.Enye yezinto ezintsha eziqavile kwaba ukwethulwa kweNdlela Yokubambisana entsha - yathuthukiswa kusukela ekuqaleni kobhubhane lwe-coronavirus ikakhulukazi kulabo abasebenza nokufunda bekude.
Imodi idala umuzwa wokuthi bonke abahlanganyeli bomhlangano basegumbini elifanayo ledijithali.Ubuchwepheshe bokuhlukanisa obusekelwe ku-AI buyisa isithombe sombambi qhaza kungemuva elijwayelekile.Ingabukeka, ngokwesibonelo, njengegumbi lokufundela, lapho abantu abangama-49 bengabuthana khona kanye.Ukuze uthole amatafula ayindilinga nama-workshops, ezinye izizinda nazo zinikeziwe.
I-Together Mode okwamanje iku-beta futhi inkampani ithembisa ukuyikhulula kubo bonke abasebenzisi beQembu ngo-August.Izihlungi zamavidiyo nazo zizotholakala Emaqenjini.Egunjini lokuhlola kuqala, umsebenzisi angakhetha isihlungi ukuze alungise izinga lokukhanyisa futhi athambise ukugxila kwekhamera ngaphambi kokujoyina umhlangano.Ungakwazi, isibonelo, ukukhetha ukufiphalisa ingemuva ngemuva kwakho.
Esinye isibuyekezo yi-Dynamic View.Njengoba iMicrosoft yasho, kube nokwenzeka ukukhombisa izinto zokusebenza ngokubambisana nabahlanganyeli bomhlangano ngokwabo esikrinini esifanayo.Ukufinyelela emilayezweni yengxoxo nakho kubuyekeziwe.Yonke le miyalezo ethunyelwe phakathi nomhlangano we-Microsoft Teams izovela ezikrinini zawo wonke umuntu ngaphandle kokuthi uvule iphaneli yengxoxo ngokuhlukana.
Nokunye okunye okusha - imibhalo engezansi enokuhumusha.Abahlanganyeli bazokwazi ukufinyelela isevisi ehumusha inkulumo isuka kwezinye izilimi ngesikhathi sangempela.Ngakho-ke, izingqungquthela zizovumela abantu abangakhulumi ulimi olulodwa ukuthi baxhumane.Kamuva kulo nyaka, iMicrosoft ithembisa ukwengeza imibhalo yombhalo yemihlangano, okuzokuvumela ukuthi uqophe okushiwo.Ngemva komhlangano, ifayela lokuloba eligcwele lizolondolozwa ngokuzenzakalelayo kuthebhu yengxoxo yalowo mhlangano.
I-Microsoft ithi amaThimba maduzane azokwazi ukusekela izethameli ezifika ku-1,000 XNUMX, kanye nabantu abangafika ku-20,000 uma kukhulunywa ngokubuka izethulo noma izingxoxo.Ngohlelo lokusebenza lweselula, inkampani ithembisa ukuletha ukusekelwa komsizi wedijithali we-Cortana.Kuzokusiza ukuthi wenze izingcingo ngaphandle kokuthinta kumuntu othile, xhuma umsebenzisi emhlanganweni ohleliwe, utshele imilayezo futhi uyithumele, kanye namafayela adingekayo engxoxweni yenkomfa.
Okusha ku-Jivo: ingxoxo yevidiyo, izibalo ze-akhawunti nabahlinzeki abasha bama-chatbots
Silungiselele ukuqanjwa okumbalwa okuwusizo okuzokwenza lula umsebenzi nge-Jivo futhi kusize ukukhulisa ukuthengisa.
Sebenza namakhasimende ngengxoxo yevidiyo
Kanye neVideoForce, silungiselele isisombululo esizokuvumela ukuthi ugqame emqhudelwaneni - manje usungakwazi ukusebenzisana namakhasimende esayithi ngokuxhumana kwevidiyo, njengoba kwenzeka mathupha.
Sebenzisa ikhodi yephromo engu-VF2022kuze kube umhlaka-03/01/2022 futhi uthole izinsuku ezingu-30 zamahhala zokufinyelela isethi egcwele yemisebenzi ye-VideoForce.
Hlaziya izibalo esigabeni "sesimo se-akhawunti".
Manje esigabeni "Isimo Se-akhawunti" ungakwazi ukuqoqa futhi uqhathanise idatha yanoma isiphi isikhathi.Lapha ungakwazi futhi ukubona ulwazi lwezingxoxo namakholi anezihlungi ezimisiwe.
Hlaziya izibalo bese unquma ukuthi ungazithuthukisa kanjani lezi zinkomba.
Xhuma ama-chatbots ngabahlinzeki abasha
Siyaqhubeka nokwandisa uhlu lozakwethu ongakha ngalo eyakho i-chatbot.Kulokhu sesisungule ukuhlanganiswa nezinsizakalo ze-Dahi.ai kanye ne-Metabot.
I-chatbot ingasiza ekwehliseni umthwalo wokusekela futhi ikhulise ukuthengisa.Ngosizo lwezinsizakalo ze-Dahi.ai kanye ne-Metabot, ungakwazi ukumisa i-bot ngokuzimela, wengeze eyakho noma usebenzise imibhalo esele yenziwe, bese uyixhuma ku-Jivo.
Izinzuzo ze-Metabot- Umakhi osuselwe kukho kokubili isikripthi nokuqashelwa kwenkulumo (i-NLU ene-Dialogflow)
- Isizindalwazi esakhelwe ngaphakathi sokuqoqa imibuzo nezinhlolovo
- Izakhiwo zeklayenti ezithuthukisiwe, ukumaka okuzenzakalelayo kanye nesabelo sepharamitha
- Izinto ezibangela ukubambezeleka kokuqala kwemibhalo nokudalwa kwama-autofunnel
- Amathuluzi okuhlanganiswa ne-API yangaphandle
- Isitolo esakhelwe ngaphakathi ku-bot
- Ulimi lokubhala olwakhelwe ngaphakathi
- Ukufakwa efwini noma kumaseva
Izindleko: mahhala (kufika kubasebenzisi abayi-100 ngenyanga), kusuka kuma-ruble ayi-1000 ngenyanga kumsebenzisi omusha ngamunye.
Izinzuzo ze-Dahi- Ezamabhizinisi Amancane Naphakathi
- Interface ngesiNgisi kanye Turkish.IsiRashiya sisekelwa kuzingxoxo ze-bot.
Okunye ukukhishwa kwabezindaba
Izincwadi zezindaba ze-Vedomosti - thola izindaba zebhizinisi eziyinhloko ngeposi
Isinqumo Senkonzo Kahulumeni Yokuqondisa Ezokuxhumana, Ubuchwepheshe Bolwazi kanye Nemidiya Yezokuxhumana (i-Roskomnadzor) yangomhla zingama-27 kuNovemba, 2022 EL No. FS 77-79546
Umsunguli: I-JSC "Imidiya Yezindaba Zebhizinisi"
Futhi mayelana.Umhleli Oyinhloko: Kazmina Irina Sergeevna
Isengezo sokukhangisa nolwazi ephephandabeni iVedomosti.Ibhaliswe yi-Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) ngaphansi kwenombolo PI No. FS 77 - 77720 yangomhla ziyi-17 kuJanuwari, 2022.
Noma yikuphi ukusetshenziswa kwezinto kuvunyelwe kuphela ngaphansi kwemithetho yokuphrinta kabusha futhi phambi kwe-hyperlink ku-vedomosti.ru
Izindaba, izibalo, izibikezelo nezinye izinto ezinikezwa kuleli sayithi azihlanganisi isipho noma izincomo zokuthenga noma ukuthengisa noma yiziphi izimpahla.
Isayithi lisebenzisa amakheli e-IP, amakhukhi kanye nedatha ye-geolocation Yabasebenzisi Besayithi, imigomo yokusetshenziswa iqukethwe kuNqubomgomo Yobumfihlo.
Wonke amalungelo agodliwe © Business News Media JSC, 1999—2022
I-Asian-Pacific Bank imema engxoxweni yevidiyo ethi “Umthelela wobhubhane ezimakethe zamazwe omhlaba nezimakethe zokuhwebelana kwamanye amazwe” kuTelegram ngoDisemba 17 ngo-12:00.
Eminyakeni emibili edlule, kube nezinguquko emhlabeni wonke ezimakethe zamasheya.Lo bhubhane usaqhubeka nokuthinta ezombusazwe kanye nezomnotho zomhlaba.Ngabe umphakathi wezezimali usabela kanjani enkingeni ye-coronavirus?Yiziphi izinketho zokuthuthukiswa kwemicimbi?Yini egcinelwe izimali zomhlaba?
NgoDisemba 17, ngo-12:00 isikhathi saseMoscow, isiteshi seTelegram se-Asia-Pacific Bank t.me/atb_su sizosingatha i-webinar yengxoxo yevidiyo ngesihloko esithi "Umthelela wobhubhane ezimakethe zamasheya zamazwe ngamazwe kanye nezimakethe zokuhwebelana kwamanye amazwe."
U-Vladimir Burdenko, iNhloko yoPhiko Lwebhange Lokutshalwa Kwezimali e-Asia-Pacific Bank, uzokhuluma ngendlela umnotho wezwe oziphathe ngayo ngesikhathi sodlame lwe-COVID-19, mayelana nokusabela kweziphathimandla zezezimali ngesidingo sokuzivumelanisa nezimo ezintsha nokuthi yini ezokwenzeka. ushintsho ezimakethe zezimali esikhathini esizayo esiseduze ...
Ingxoxo yevidiyo yesiRashiya, mahhala
Ngazo zonke izinhlobo zabantu.Ukusakazwa ku-inthanethi kulungiselelwa ngendlela yokuthi kube lula futhi kujabulise ukukwenza.Uxhuma futhi ngokushesha ufike ku-interlocutor.Uma uthanda - uyazana, uma ungathandi - ucindezela inkinobho futhi unobuso obusha phambi kwakho.
Izingxoxo ezijabulisayo, ukudlala ngothando okungabophi, izingxoxo zamafilimu amasha namathrendi emfashini, futhi ngezinye izikhathi izingxoxo ezinde phakathi kwamabili “impilo yonke”.Ngokuvamile, noma isiphi isimo sengqondo onaso namuhla, nakanjani uzobamba igagasi lakho lapha.
Singaba ngani :)
Yebo, kwenzeka ngathi.Futhi ngokuvamile.Uyabona, ukuxhumana ku-inthanethi kuthembeke kakhulu kunasempilweni yangempela.Lapha ungaba nguwe futhi ungazivumelanisi nanoma ubani.Lokhu kusho ukuthi kulula ukubona umuntu osondelene nawe emoyeni.
Ungenza ngokwezifiso usesho lwakho ngombala wezinwele, usayizi webele kanye nekhono lokupheka le-borscht.Kuhle, kuhle.Besincokola) Kodwa amantombazane ethu apholile ngempela.Zibheke wena, lena ingxoxo Yevidiyo.
Kukhona ezahlukene.Ama-Brunettes, ama-blondes, ama-redheads.Abadlali bezemidlalo, abaculi, ama-stylists.Abameli, abahleli bezinhlelo, amasosha.Osomabhizinisi, abaphathi nabasebenzi.Uxolo, awekho amakhosana ehhashi elimhlophe.Kodwa sibheka :)
Ngempela, lolu hlobo lwevidiyo lufika ngezinye izikhathi!Badlala isiginci, bacule izingoma futhi badlale nama-beatbox.Ungabi namahloni futhi.Bonisa umhlaba ithalenta lakho.Kwazi bani, mhlawumbe abakhiqizi nabo balenga lapha)
Lapha sigubha izinsuku zokuzalwa futhi sihlela "amaphathi azindikimba" ngisho nezimpande zeqembu labo lebhola eliyintandokazi ndawonye.Sijoyine!Phela, ukuzijabulisa kumnandi kakhulu enkampanini enkulu.
Bafuna ukuhlangana nawe!Babhalele ngokushesha ngangokunokwenzeka!
Sidale le ngxoxo yevidiyo ukuze abantu abavela kuwo wonke umhlaba bahlangane futhi babe nesikhathi esimnandi.Okuhamba phambili kwethu ukuhloniphana kubo bonke ababambiqhaza bengxoxo.Ayifaki imiqondo efana nenhlamba, amanyala, inhlamba nokululazwa kwesithunzi somuntu.Konke lokhu kumenyezelwe emithethweni yokusebenzisa insiza yethu.Sicela uzifunde ngokucophelela ngaphambi kokuthi uqale ukusakaza kwakho kokuqala.
Umbuzo: Ingabe le ngxoxo yevidiyo eyayo yonke iminyaka kuphela?
A: Akubona abantu abadala kuphela abaxhumanayo lapha, kodwa izingane zenqatshelwe ngokuphelele ukuhlanganyela engxoxweni.
Q: Ukuxhumana okunesizotha kuphela!
IMP: Sicela ube nesizotha futhi ucabangele engxoxweni yethu yevidiyo!Futhi bayoba nawe futhi!
Umbuzo: Ingabe singowokuxhumana okunesizotha nokujabulisayo?
IMPENDULO: Akwamukelekile ukudelela nokulungisa izinto lapha.Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa ulimi olungcolile.Noma yiluphi ulimi olunenhlamba aluvunyelwe.Zihloniphe wena nabanye.
Q: Abashisekeli, amaphekula kanye nabanye abashisekeli bezempi - dlula ehlathini !?
IMPENDULO: Sixhumana nabantu bezizwe, izinhlanga nezinkolo ezehlukene.Futhi, ngokuxakile, bathola ulimi oluvamile phakathi kwabo.Ngakho-ke, uma othile ekucasula, vele ushintshele kwenye i-interlocutor.
Q: Kwenqatshelwe ngokuphelele ukusakaza izithombe zabanye abantu, amavidiyo kanye nolwazi lokuxhumana engxoxweni?
IMP: Awukwazi ukuthumela imininingwane eyimfihlo yabantu besithathu emphakathini.Lo mkhawulo uyasuswa kuphela uma ubona uhlobo oluthile lobugebengu.
Umbuzo: Ingabe ingxoxo yevidiyo ayiyona indawo yokukhangisa?
IMP: Nikeza ngezimpahla namasevisi ngezinsiza ezizinikele.Ngendlela, akuvunyelwe futhi ukukhangisa amanye amasayithi.
Engxoxweni yethu yevidiyo, ungaxhumana ngaphandle kokubhalisa, kodwa lokhu akusho ukuthi ngeke sikwazi ukulandelela izigebengu nezigebengu.Esizeni, sinelungelo lokurekhoda ngokuzenzakalelayo konke ukusakazwa komsebenzisi, ngakho-ke, uma kunesidingo, ngeke kube nzima ukuthola nokujezisa umenzi wobubi.Usenemibuzo?Ingabe unazo iziphakamiso zokuthuthukisa umsebenzi wengxoxo yethu yevidiyo?Oxhumana nabo ukuze kuxhunyanwe nabaphathi bangezansi.
Ungayakha kanjani ingxoxo yevidiyo yeqembu ku-WhatsApp
Ukuvuselelwa kwakamuva ku-WhatsApp kuletha isici osekukudala silindelwe: ikhono lokudala izingxoxo zomsindo nevidiyo zeqembu.Ungayiqala kanjani ingqungquthela yevidiyo ku-WhatsApp noma ushayele abantu abambalwa ngesikhathi esisodwa, sizokutshela esihlokweni sethu.
Asebenza Kanjani Amakholi Amaqembu E-WhatsApp
Nakuba lo msebenzi ungatholakali kubo bonke abasebenzisi - kancane kancane uvulwa ezifundeni ezahlukene.Izingcingo zeqembu zingenziwa kuphela yilabo abafake inguqulo yamanje ye-WhatsApp.
Phakathi nekholi yomsindo enguqulweni entsha yohlelo lokusebenza, ungamema omunye umuntu enkampanini ku-interlocutor yakho.Okusho ukuthi, kuzoba nabantu abathathu engxoxweni yomsindo.
Izingcingo zevidiyo ziyenzeka phakathi kothintana nabo abane, ukuze ukwazi ukwengeza abantu ababili ngaphezulu engxoxweni.
Uma udinga ukuhlanganisa abantu abangaphezu kwabane engqungqutheleni, sebenzisa ezinye izinhlelo.Sikhulume kabanzi mayelana nezinsizakalo zamahhala zokuxoxa ngevidiyo esihlokweni esihlukile.
Iyini ingxoxo yevidiyo
Ukuxhumana kudlala indima ebalulekile empilweni yenhlalo yawo wonke umuntu.Kodwa namuhla, ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe, kungenzeka ukukhuluma nomuntu oxhumana naye ngezihloko ozithandayo ku-intanethi.Izingxoxo zevidiyo, ezithola ukuduma ngokushesha, zizosiza ukufeza lokhu.
Bayini?Lena ingxoxo yevidiyo esekela ukudlalwa kabusha kwevidiyo nolwazi lomsindo ngoxhumano lwe-inthanethi.Isici salo silele eqinisweni lokuthi abaxhumanisi abangaphezu kwababili bangaxhumana kuyo.Ukuze uqale ukuxoxa ngevidiyo, udinga nje ukuba nekhompyutha enoxhumo lwe-inthanethi, isidlali se-flash esisebenzayo, ikhamera yewebhu, umbhobho namahedfoni.
Ukuxhumana ngengxoxo yevidiyo cishe akukho ngaphansi kwengxoxo ekuphileni okuvamile, njengoba umkhathi weqiniso usekelwa ukuxhumana okubonakalayo. I-roulette yengxoxo idingeka kakhulu kubantu abasha, okukuvumela ukuba ujabule futhi uthole abangane abasha abavela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba. Uhlelo lwesayithi luklanyelwe ngendlela yokuthi ngaphambi kokuba uqale ukukhetha i-interlocutor, ungafaka imingcele oyifunayo, isibonelo, iminyaka noma izwe lokuhlala. Inzuzo enkulu yokuxhumana ku-inthanethi ukuthi ibangela imizwelo eminingi engavamile kanye nokushesha kwe-adrenaline kumuntu, okwenza kube nokwenzeka ukuba ungabi namandla, ngisho nakulabo bantu abanezinkinga eziningi namahloni empilweni yangempela. Ngamanye amazwi, ingxoxo yevidiyo isilungele ukunikeza wonke umuntu ukuxhumana okulula, okungaphazanyiswa noma nini uma ingxoxo iyeka ukukufanela.
Uma ukholelwa izibalo, imibhangqwana eminingi lapho indoda nomfazi beyizakhamuzi zamazwe ahlukene yakhiwe ngenxa yokuxhumana ezingxoxweni zevidiyo.Ngakho-ke, uma ungakwazi ukuthola umlingani womphefumulo endaweni yakho eseduze isikhathi eside, noma umane ungenakho ukunakwa okwanele kwabobulili obuhlukile, vele uye engxoxweni ye-roulette.Lapha ngokuqinisekile uzothola i-interlocutor ongaba nayo inkulumo ejabulisayo futhi esikhathini esizayo uhlele umhlangano empilweni yangempela.
Futhi, ungakhohlwa ukuthi izingxoxo zevidiyo zizoba yisixazululo esihle kakhulu kubantu abafuna ukufunda olunye ulimi.Phela, ngisho noma uhlolisisa izisekelo zethiyori nsuku zonke, ngeke ukwazi ukufeza umphumela oyifunayo ngaphandle kokuzijwayeza.Ingxoxo yevidiyo iyinsiza exhuma izigidi zabantu abavela emazweni ahlukahlukene.Ngakho-ke, ungakwazi ukuhlanganisa ukuxhumana okujabulisayo nokusebenza kolimi okudingekayo.
Amaqembu e-Microsoft azothola ukubethelwa kokuphela ekupheleni ngoJulayi
NgoMashi walo nyaka, iMicrosoft yathembisa ukunikeza ibhizinisi layo inkundla yeMicrosoft Teams ukwesekwa kokubethela kokuphela ukuya ekupheleni maduze nje.Inkampani isanda kumemezela ukuthi ukukhishwa kwalesi sici kuzoqala ekuqaleni kukaJulayi.Kuzothatha cishe amasonto amabili ukuyihlanganisa ngokugcwele.
Ukubethela ngasemaphethelweni ukubethela kolwazi emthonjeni walo kanye nokubhala ngemfihlo ngenjongo ehlosiwe ngaphandle kokuba nokwenzeka kokukhishwa kwemfihlo ngamanodi amaphakathi.Amaqembu e-Microsoft azosebenzisa ukubethela kokuphela ukuya ekupheleni (E2EE) kumakholi we-VoIP wesikhashana amaqembu amabili, okuvumela abasebenzisi ukuthi badlulise ngokuphephile imininingwane ebucayi njengamaphasiwedi.
Ngokuya ngengosi ye-MSPoweruser, lesi sici singanikwa amandla abalawuli kubo bobabili abasebenzisi abathile kanye nenhlangano yonke.Abasebenzisi bangabese benika amandla ukubethela ngasemaphethelweni besebenzisa inketho Yokubethela Kokusuka Kuye-kuya-Ekupheleni ngaphansi kokuthi Izilungiselelo -> Ubumfihlo.Ukurekhoda ikholi nokulotshiwe ngeke kusatholakala.Amakholi e-E2EE azosekela kuphela izici eziyisisekelo ezifana nomsindo, ividiyo, ukwabelana kwesikrini, ingxoxo, nezici ezithuthukile ngeke zitholakale.
Ukubethela kuzosebenza kuphela uma kokubili ofonayo nomamukeli wocingo benike amandla i-E2EE kuzilungiselelo zabo.Ukubethela ngasemaphethelweni kuzotholakala kuphela kudeskithophu kanye namakhasimende eselula, hhayi enguqulweni yewebhu Yamathimba.
U-Snapchat usolwa ngengozi yemoto eyingozi
Ngemva kweminyaka emithathu yemizamo eyize yokumangalela isithunywa se-Snapchat esidumile, abazali bentsha eshone ezingozini zezimoto banethuba lokuletha inkonzo engathinteki ebulungiswa.Kubonakala sengathi "Isigaba sama-230" esidume kabi nesingantengantengi seKhodi Yemithetho yase-US, ekhulula umnikazi wesisetshenziswa se-inthanethi ekuziphenduleleni ngalokho abasebenzisi abakuthumela kuso, siphukile.
Sizokhumbuza, ngoMeyi 2022 eWalworth County, Wisconsin, abantu abasha abathathu bafa engozini yemoto, bezithwebula ku-Snapchat. Ngokusho kwabazali besinye sezisulu, umshayeli uphuthume ku-123 mph ukuze athwebule isivinini esikhulu esebenzisa i-Snapchat futhi abelane ngempumelelo engabazekayo nababhalisile. Bakholelwa ukuthi intsha ibingeke yenze ubuwula obunjalo ukube bekungengenxa yezenzo zenkonzo ye-Intanethi.
Iqiniso liwukuthi i-Snapchat ikuvumela ukuthi usebenzise izihlungi ezihlukahlukene ku-intanethi, kufaka phakathi, phakathi kwemisebenzi ethandwayo, kukhona ikhono lokudubula ividiyo "ngesihlungi sejubane". Ukwenza lokhu, uhlelo lulandelela indawo yedivayisi kusetshenziswa izinzwa ze-GPS futhi lubonise inani lejubane kuvidiyo. Abazali bakholelwa ukuthi isevisi yevidiyo kufanele ithweswe umthwalo wemfanelo ngokwenzekile ngenxa yokuthi ikhipha amathuluzi anjalo, okusho ukuthi ikhuthaza abasebenzisi ukuthi benze izinto ezimbi lapho bengekho.
Imizamo yokuqala okungenani yokuletha abamele i-Snapchat enkantolo ayiphumelelanga. Kuvele ukuthi lezi zinhlobo zezinkampani zobuchwepheshe ziwela ngaphansi kokuvikelwa "kweSigaba 230" futhi zikhululekile ngokuphelele ekuzibophezeleni ngezenzo zabasebenzisi ngaphakathi kwesevisi. Akunandaba ukuthi ishicilela izinto ezingalungile noma isebenzisa isevisi ngezinjongo zokuzijabulisa esimeni esiyingozi - njengalesi simo. Ngakho-ke, iNkantolo Yokudlulisa Amacala YaseMelika Yesifunda Sesishiyagalolunye yamane yasichitha isicelo futhi yalichitha icala ngaphandle kokuqulwa kwecala.
Ngemva kweminyaka eminingana yemizamo eyize yokudlula "Isigaba 230" esidumile, abamangali bazama ukusuka kolunye uhlangothi - uma kukholakala ukuthi i-Snapchat ihilela abasebenzisi ukwenza noma yiziphi izenzo eziyingozi nezingamukeleki, khona-ke icala linganqotshwa enkantolo. . Isevisi ingase ingabi nesibopho ngezenzo zabasebenzisi, kodwa kuzoba nesijeziso sokugqugquzela ukwenza noma yisiphi isenzo.
Yiqiniso, lesi simo sifinyelele iphuzu elingenangqondo - umthetho ukhona kusukela ngo-1996, ngakho-ke, akunakwenzeka ukucabangela isenzo saso esilungile ngokuphelele manje, ukuyibeka kancane.Ngesikhathi esifanayo, ukubambezeleka kwe-bureaucratic kusekhona, futhi izinkantolo azikwazi ukwenza lutho ngokuqondile emacaleni anjalo.Lesi simo sesivele sabangela ukungezwani okukhulu emphakathini, futhi iNkantolo Ephakeme yase-US u-Clarence Thomas ube nesithakazelo ecaleni eliyinkimbinkimbi - lokhu kusho ukuthi akhona wonke amathuba okukhonza i-Snapchat nge-subpoena ngisho nokuwina icala elivuna abalimele. iphathi.Ngaphezu kwalokho, ukunqoba kwelinye icala kungase kuvule amathuba okuletha ezinye izinhlangano eziye zagwema umthwalo wemfanelo ngaphambili futhi eziqhubeka nokusebenza ngokuphambene nemithetho yokuziphatha.
Amaqembu e-Microsoft azothola ukubethela kokugcina kanye namandla okwethula athuthukisiwe
I-Microsoft iyaqhubeka nokuthuthukisa inkundla yayo yezinkampani ze-Microsoft Teams futhi izongeza izici eziningi ezintsha kuyo maduze.Okokuqala, ukubethela ekugcineni kuzovela ekugcineni endaweni yesikhulumi, futhi okwesibili, inkampani izohlukanisa izilungiselelo namandla enkomfa ngevidiyo.
Inguqulo ye-beta yesici sokubethela ekupheleni ukuya ekupheleni ku-Microsoft Teams izovela engxenyeni yokuqala yalo nyaka kubasebenzisi bezentengiselwano benkundla.Izotholakala kumakholi angahleliwe nabahlanganyeli ababili.Ngokuzayo, kuhlelwe ukwethula ukubethela ngasekugcineni kwezingqungquthela zevidiyo ezihleliwe nenani elikhulu labahlanganyeli.
I-Microsoft Teams okwamanje ayikusekeli ukubethela ngasemaphethelweni kwamakholi wevidiyo. Idatha ibethelwe uma kuthuthwa futhi lapho kugcinwe khona, okungase kushiye kube nokwenzeka ezinsizeni ezigunyaziwe ukuyifinyelela ngokuyisusa. Inkampani isebenzisa ukubethela kwe-SharePoint ukuvikela idatha egciniwe, futhi ukubethela kwe-OneNote kusetshenziselwa amanothi agcinwe ku-Microsoft Teams. Konke okuqukethwe kwengxoxo nakho kubethelwe ngesikhathi sokudlulisa nokugcinwa. Oqhudelana naye oyinhloko we-Microsoft Teams, uSlack, naye akanakho ukubethela kokugcina. Futhi insizakalo ye-Zoom iqale ukuhlanganisa ubuchwepheshe ngo-Okthoba ngonyaka odlule.
Izindlela zokwethula ezintsha zizovela futhi ezilungiselelweni zenkomfa yevidiyo ye-Microsoft Teams.Imodi yentatheli izovumela okuqukethwe kwedijithali ukuthi kufakwe kufreyimu eduze kobuso besikhulumi njengendlela yokubuka kobukayo.Indlela efanayo isetshenziswa ekusakazeni izindaba zethelevishini.
Imodi yokuma ikuvumela ukuthi ubeke ubuso bakho phezu kokuqukethwe okwethulwayo, okutholakala kuyo yonke indawo yesikrini.Imodi yesithathu yehlangothi nehlangothi ibeka ubuso besikhulumi eduze nokuqukethwe okwethulwako.Imodi yokuma iza ku-Microsoft Teams ngokuhamba kwesikhathi kule nyanga, nezinye izindlela ezimbili ezizayo kamuva.
IMicrosoft iphinde yethula i-plugin ye-PowerPoint Live yamaThimba namuhla.Izokwenza lula izethulo ze-PowerPoint kubo bobabili umethuli nabanye ababambiqhaza benkomfa.
Manje abethuli bangabona ingxoxo, amanothi namaslayidi efasiteleni elilodwa, futhi abanye abahlanganyeli bomhlangano bangakwazi ukubuka amaslayidi ethulwe ngokuzimela.
Umnikazi we-Tinder uthenga unjiniyela wezinsizakalo zevidiyo waseKorea i-Hyperconnect ngamadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.7
I-Match Group, ephethe i-Tinder, imemezele ukuthengwa kwenkampani yezinsizakalo zevidiyo yaseKorea iHyperconnect.Isivumelwano sifinyelele ku-$ 1.7 billion.Lokhu ukutholwa okukhulu kunakho konke emlandweni we-Match Group.
I-Dallas Morning News
Unjiniyela wase-Korea ungumnikazi wezinhlelo zokusebenza ezimbili ezinkulu: I-Azar eyokuxoxa ngomsindo nevidiyo, kanti i-Hakuna Live ingeyokusakazwa ku-inthanethi.Inkampani yaseKorea inenzuzo, kanti imali engenayo ka-2022 ifinyelela ku-$ 200 million, kusho i-Match Group.Lokhu kungamaphesenti angama-50 ngaphezu konyaka odlule.Izinsizakalo zithandwa kakhulu emakethe yase-Asia, ngakho-ke, i-75% yemali engenayo ivela kubahlali base-Asia.
I-Hyperconnect iphinde yaziwa ngemiklamo yayo emisha.Inkampani idale lokho ekubiza ngokuthi "inguqulo yokuqala yeselula" ye-WebRTC.Idizayinelwe ukuxhumana okuqondile kontanga kuya kontanga kubasebenzisi beselula ngaphandle kokusebenzisa amaseva.Lokhu kuthuthukisa ukuphepha komsebenzisi futhi kunciphisa okungaphezulu kukanjiniyela.
Obunye ubuchwepheshe benkampani yaseKorea benza kube lula ukuthi abameleli bamaqembu ezilimi ezahlukene baxhumane.Ivumela abaxoxisi ukuthi bakhulume futhi babhalelane besebenzisa ukuhumusha kwesikhathi sangempela.Lesi sici sisetshenziswa kusevisi ye-Azar.
Kungaziphi izinjongo i-Match Group etholwe ku-Hyperconnect ayicacisiwe.Izintatheli ze-Techcrunch ziqagela ukuthi inkampani ingase ihlanganise ubuchwepheshe ku-Tinder nezinye izinsiza zokuphola esikhathini esizayo.Ukuvalwa kwesivumelwano kulindeleke engxenyeni yesibili ka-2022.
U-Zoom ulahlwe yicala lokuhlanekezela izibalo zabasebenzisi abasebenzayo
Isevisi yokushaya ividiyo ye-Zoom ayinabo abasebenzisi abasebenzayo nsuku zonke abayizigidi ezingama-300 inkampani eyabamemezela ngaphambilini.Umhlinzeki wesevisi ulivumile leli qiniso ngemva kokuba ingosi ye-Verge idonsele ukunaka esitatimendeni esisemthethweni esishicilelwe ngaphambilini esihlelwe yiyo.
Isitatimende sokuqala sika-Zoom sithe... "ngaphezu kwezigidi ezingama-300 abasebenzisi nsuku zonke."futhi."Bangaphezu kwezigidi ezingu-300 abantu emhlabeni jikelele abasebenzisa i-Zoom ngalesi sikhathi esinzima" ...Ngemva kosuku, umlayezo wahlelwa.Manje isifundeka kanje"300 Million Zoom Video Conferencing Members. "
Njengoba i-The Verge ikhomba, kunomehluko omkhulu mayelana nomsebenzisi osebenzayo nsuku zonke kanye nomhlanganyeli wengxoxo yevidiyo.Esimweni sesibili, umuntu ofanayo angabalwa izikhathi eziningana: uma uhlele izikhathi ezinhlanu zokuxhumana ngevidiyo phakathi nosuku, uzobalwa njengabasebenzisi abahlanu."Umsebenzisi Osebenzayo Wansuku zonke" ubalwa kanye kuphela ngosuku.Kukule nkomba lapho ukuthandwa kwenkonzo ethile kuvame ukubalwa.Uma kungenjalo, izethameli zenkundla zizobukeka zizikhudlwana kunalokho eziyikho ngempela.
U-Zoom uhlele umlayezo odukisayo ngo-Ephreli 24, ngemva kosuku kuphela ushicilelwe, okwakwazi ukusabalala kuzo zonke izihloko zezindaba ezishicilelwe ku-inthanethi.Ngemuva kokuthi i-The Verge isondele ku-Zoom, inkampani yasheshe yalivuma iphutha.
“Siyaziqhenya ngokusiza abangaphezu kwezigidi ezingama-300 abahambele ikholi yevidiyo nsuku zonke ukuthi bahlale bexhumekile ngesikhathi sodlame.Kokuthunyelwe kubhulogi yethu ngomhla zingama-22 kuMbasa, sabiza amalungu singaqondile ngokuthi “abasebenzisi”.Ngemva kokubona iphutha, sihlele umlayezo “kumalungu”.Lokhu bekuwukungamela kahle kwethu uhlangothi,”uZoom uphendule isicelo se-The Verge.
Ukushicilelwa okuku-inthanethi kuphawula ukuthi yize inkampani ibingakanikezeli ngedatha enanini labasebenzisi bansuku zonke, ukukhula kwezithameli ze-Zoom kuyamangalisa ngempela.Kusukela ngoDisemba nyakenye, isibalo sababambe iqhaza kwi-videoconferencing nsuku zonke sikhuphuke sisuka ezigidini eziyi-10 saya ezigidini ezingama-300 namuhla.
Izimbangi ezinkulu ze-Microsoft Teams kanye ne-Google Meet basalela emuva, kodwa futhi bandisa isibalo sabasebenzisi abasebenzayo.Izithameli zansuku zonke zezingxoxo zevidiyo ze-Microsoft zenyanga zikhule zisuka kubantu abayizigidi ezingama-70 zaya ku-75.Kule nyanga, inkampani iqophe ababambiqhaza be-videoconferencing abayizigidi ezingama-200 ngosuku.
Inombolo yabahlanganyeli bekholi yevidiyo ye-Google Meet ikhula cishe ngezigidi ezingu-3 nsuku zonke ukuze ifinyelele ezigidini ezingu-100. Uhlelo lokusebenza lwe-Cisco lwe-Webex lokusebenzisana selisetshenziswe kakade abantu abayizigidi ezingu-300.Futhi inani lokubhaliswa ngosuku lisondela ku-240 000. Kodwa inkampani namanje ayinikezi izinkomba zabasebenzisi abasebenzayo nsuku zonke kanye nenani labahlanganyeli emihlanganweni yevidiyo.
I-Google, iMicrosoft, i-Facebook isendimeni yokubamba futhi izama ukuheha abasebenzisi abasha ngamathuba amahhala.Isibonelo, i-Google isanda kwenza isevisi yayo ye-Meet ibe mahhala.